Qaranka waa dhismaa hadii qaanuunka la dhowro.
H. Asad | avv_12@hotmail.com
Baryahaan waxaa soo baxay khilaaf ra’yi iyo mid siyaasadeed ee ka jira guud ahaan Golayaasha Dawlada, gaar ahaan Madaxa Qaranka Madaxwayne Cabdilaahi Yuusuf Ahmed iyo Madaxa Dawladda Prof. Cali Maxamad Gedi.
Iyadoo khilaafku salka ku haayo awooda xukunka iyo laalida xilal awoodeed.. Bogag lahaan jiray sumcad wararka ay soo tebiyaan ayaa qoray ra’yi sharciyadeed ku saabsan jiritaanka Dawlada Prof. Cali maxamad Geedi. Bogga wuxuu ka beensheegay qaanuunka Dawladda ku dhisan tahay (Axdiga ku meel gaarka ah).
Bogga ma soo qaadan qodob amaba qodobbo uu ku salaynaayo ra’yigiisa ee ah in jiritaanka dawlada Federaalka ah ku egtahay 12ka bisha Oct. 2007da.
Waxaa aqoondarro iyo ka fiirsasho la’aan ah in ay ku andacoodeen “ in dawladu ay sadex jirsanayso 12ka Oct. 2007 waqtigeedana dhamaaday.
Dawladu waxay sadex jirsanaysaa Janaayo /2008. oo ka soo bilaabatay markii la dhisay dawladii 2aad ee Prof. Geedi Baarlamaankuna kalsoonida siiyay.Mana jirto wax cayimaaya wakhtiga jiritaanka dawladda mudada shanta sano ee ay haysato masuuliyada talada (Mandate). Waxaase u furan sida hada ka horba dhacday sanad ka hor in motion la gayn karo Baarlamaanka si kalsoonida loogala naqdo dawlada jirta.
Kadib markaan hor dhignay nuqul Axdiga ku meelgaarka ah dhawr garyaqaan waxaa ku cadaatay axdiga in aan haba yaraatee Ra’yigaasi meel ka cugsanayn Axdiga iyo qaanuunka toona .
Bal Akhri waxa uu ka qabo axdigan.
Qodobka 49aad Qaybtiisa 2aad Axdiga ku meel gaarka ah wuxuu leeyahay sidan:
Wasiirka koowaad wuxuu xafiiska hayn doonaa ilaa
Uu geeriyooo, is casilo, ama laga qaado xilka, ama (xilka qaadidaas oo u baahan in ka badan 50% xubnaha baarlamaanka iney kala noqdaan kalsoonida sida ku cad Qodobka 51aad ee Axdiga ku meel gaarka ah ee hoos ku cad..
Ilaa xilka cid kale loo soo magacaabo (taas micnaheedu maaha si dadka qaarkiis u qaadan karaan in la soo magacaabi karo ra’isul-wasaare kale asagoo midka jooga weli xilka laga qaadin. Micnuhu waa hadii rai’sul-wasaaruhu lumiyo kalsoonida baarlamaanka xilkana laga qaado inuu xilka sii hayn doono ilaa laga magacaabo isla asaga ama mid kale.
Sida aan kor ku soo xusnay, xil ka qaadida wasiirka koowaad wxay ku cadahay si aan mugdi lahayn Qodobka 51aad ee axdiga ku meel gaarka ah, wuxuuna leeyahay sedan:
Xil ka qaadista wasiirka koowaa/ ku xigeenada wasiirka koowaad
hadii in ka badan 50% golaha shacabku ama baarlamaanku soo jeediyo go’aan kalsooni darro ah wasiirka koowaad, Madaxweynuhu wuxuu xilka ka qaadayaa wasiirka koowaad iyo golaha wasiirada.
Madaxweynaha xilka kama qaadi karo wasiirka koowaad ama ku xigeenada wasiirka koowaad inta uu jiro golaha shacabka ama baarlamaanka, si kastaba ha ahaatee oo aanan ahayn arinta ku cad Qodobka 51aad firqadiisa 1aad.
Sida ku cad Qodobka 51aad firqadiisa 2aad, ma jirto arrin aanan ahayn kalsooni kala noqoshada Golaha baarlamaanka inay jirin jid kale oo sharci ah oo loo mari karo laalida xilka wasiirka koowaad. Waa indho istirid ama aqoon la’aan in la yiraahdo dawladaa waqti ka dhamaaday si ay tahay guri ijaar ah oo qof laga kiraystay.
Hadii uu madaxwaynuhu rabo inuu laalo kursiga wasiieka koowaqad, si uu u fadhiisiyo shaqsi kale oo uu doorbidaayo sabab kasta ha lahaatee, ha u soo jeediyo taageerayaashiisa baarlamaanka ku jira inay horkeenaan motion kalsoonida kala noqanaaya wasiirka koowaad hana xodxoto tiro aan ka yarayn 139 xildhibaan. Hadii kale waxaan u soo jeedinaynaa madaxwaynaha inuu sharci daro isagu bilaabin taasoo dadajin karta burburka Dawladda. Hadii taas ayan suuro gal ahayn Mudane Madaxwayne adiga iyo wasiirkaada koowaad wadanka gaarsiiya doorasho xalaala sanad iyo bar ka dib taasoo baal dahab ka geli doontiin taariiqda wadanka.
Aqoonyahan iyo Aqoonadyahanad kasta oo rayigaan raacsan, isla markaana raba inay magacooda ku taageeraanin Qaanuunka shaqeeyo, fadlan noo soo dir magacaada iyo xiriirkaada. Waxaan u diri doonaa dhamaan masuuliyiinta iyo hayadaha ay arintaani qusayso.